Parallels - Mac တွင် Windows ကိုအသုံးပြုခြင်း၏ Ultimate Guide | ငါက Mac ပါ
Parallels သည်ကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုသည့် application တစ်ခုဖြစ်သည် ကွန်ပျူတာအက်ပလီကေးရှင်းကိုမသုံးဘဲ OS X ပါသော Windows application များကို Mac တွင် run ပါ။ ဒီ application သည် Windows မှ OS X သို့ခုန်ဆင်းပြီးအချို့ application များပေါ်တွင်မှီခိုနေရသောအသုံးပြုသူများအတွက် switchchers အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သို့သော်ရှင်းလင်းပြတ်သားသောဥပမာတစ်ခုကိုဖော်ပြရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အချို့သောလိုအပ်ချက်များကြောင့် OS X နှင့်မကိုက်ညီသောဒေတာဘေ့စ်များဖန်တီးခြင်းနှင့်စီမံခြင်းအတွက်ကောင်းမွန်သော application Office Office Access application အကြောင်းပြောနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Microsoft Access ကိုအသုံးပြုလိုပါက Boot Camp နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏ Mac တွင် Windows တပ်ဆင်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ရမည်သို့မဟုတ်အခြား application ကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac ပေါ်တွင်မည်သည့် Windows application ကိုမဆို၎င်းကိုပြန်လည်စတင်စရာမလိုဘဲအသုံးပြုခွင့်ပြုရမည်။ သို့သော် Parallels သည်မည်သည့် Windows application ကိုမဆိုအသုံးပြုနိုင်ရန်ခွင့်ပြုထားသည် ကျွန်တော်တို့ကို Linux, Chrome OS သို့မဟုတ် Android applications များသုံးရန်ခွင့်ပြုသည်.
အခြားလည်ပတ်မှုစနစ်များနှင့်သာသဟဇာတဖြစ်သောမည်သည့်ဖိုင်အမျိုးအစားကိုမဆို run နိုင်ရန်အတွက်ပထမ ဦး ဆုံး Windows, 7, 8 သို့မဟုတ် 10, Ubuntu, Android (စမ်းသပ်ဆဲအဆင့်တွင်) နှင့် Google Chrome OS စသည့်မူကွဲတစ်ခုကို install လုပ်ရမည်။ တိုက်ရိုက်လျှောက်လွှာကနေ နောက်ဆုံးပေါ် Android, Ubuntu နှင့် Chrome OS ဗားရှင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ download လုပ်နိုင်သည်။ ယုတ္တိနည်းအရ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အား Windows ၏မည်သည့်ဗားရှင်းကိုမဆိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုမပေးထားပါ၊ ၎င်းသည်၎င်းကိုထည့်သွင်းရန်လိုင်စင်လိုအပ်သည်။ ဒီ application က Windows ကို ISO image ဒါမှမဟုတ်သက်ဆိုင်ရာ DVD မှ install လုပ်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပေးသည်။
၎င်းကိုထည့်သွင်းပြီးပြီဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နေသောအလုပ်ကိုပိတ်စရာမလိုဘဲကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သော application များကိုမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုတပ်ဆင်နိုင်သည်။ နောက်ထပ်ဘာလဲ ကျွန်ုပ်တို့ Mac တွင်သိမ်းထားသောဖိုင်များကိုကျွန်ုပ်တို့ရယူနိုင်သည် ကယူနစ်ဖြစ်သကဲ့သို့ရှည်လျား format နဲ့သဟဇာတဖြစ်သကဲ့သို့သူတို့ကိုဖွင့်ပါ။ Parallels Desktop ကိုဗားရှင်းနှစ်မျိုးဖြင့်ရနိုင်သည်။
၇၉.၉၉ ယူရိုနှုန်းဖြင့်အိမ်နှင့်ပညာရေးအတွက် Standard Edition ။
developer များ၊ ဒီဇိုင်နာများ၊ ပြန်လည်သုံးသပ်သူများနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသုံးပြုသူများအတွက် Pro Edition ။ ဒီဗားရှင်းကိုယူရို ၉၉.၉၉ ဖြင့်ရောင်းချသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြား operating systems များကိုအထူးအသုံးပြုရန်မသွားပါက PC ၀ ယ်ရန်အဆင်ပြေမည်။ Standard ဗားရှင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ဆုံးလိုအပ်ချက်အတွက်ဖုံးအုပ်ထားခြင်းခံရသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူကျွန်ုပ်တို့သည် Windows ၏အလားအလာအပြည့်အဝကိုညှစ်ယူရန်လိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည် PC ဝယ်ခြင်း (သို့) Parallels ၏ Pro version အတွက်ပေးဆပ်ခြင်းကိုပြုလုပ်သည်။
1 ကွဲပြားခြားနားသော operating system များ Parallels အတွက် install လုပ်ပါ
1.1 Parallels ဖြင့် Mac တွင် Windows ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း
1.2 Parallels နှင့်အတူ Mac တွင် Android ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း
1.3 Parallels ပါသော Mac တွင် Chrome OS ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း
1.4 Parallels ပါသော Ubuntu ကို Mac တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း
2 ကွဲပြားခြားနားသောလည်ပတ်မှုစနစ်များကိုဘယ်လို run မလဲ
ကွဲပြားခြားနားသော operating system များ Parallels အတွက် install လုပ်ပါ
Parallels ဖြင့် Mac တွင် Windows ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း
ပထမ ဦး ဆုံးအနေနှင့်အဓိကလိုအပ်ချက်အနေနှင့် DVD တစ်ခု (သို့) ၀ င်းဒိုးဗားရှင်း၏ပုံရိပ်တစ်ခုရှိရန်လိုအပ်သည်၊ ၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သောနံပါတ်စဉ်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တပ်ဆင်တော့မည်။
ပထမ ဦး စွာငါအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါလိမ့်မယ်၀ င်းဒိုးသို့မဟုတ်အခြား OS ကို DVD သို့မဟုတ် image file သုံး၍ install လုပ်ပါ.
အောက်ပါ ၀ င်းဒိုးသည် OS X: DVD, Image File သို့မဟုတ် USB Drive ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac ပေါ်တွင် Windows ကိုမည်ကဲ့သို့တပ်ဆင်မည်ကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Image file ကိုရွေးချယ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်သောနည်းလမ်းပေါ် မူတည်၍ Parallels သည်ကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုလမ်းပြလိမ့်မည်။
ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီကိုသုံးမယ်ဆိုရင်၊ Mac ပေါ်မှာမိတ်ဆက်ပေးရမယ်။ ၎င်းသည် disk ပုံတစ်ပုံဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ရမည် အက်ပ်ကိုဆွဲယူပါ ၎င်းသည် USB Drive တစ်ခုဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ရမည် Mac ကိုချိတ်ဆက်ပါ။ Parallels သည်ကျွန်ုပ်တို့တပ်ဆင်လိုသောမည်သည့် Windows အမျိုးအစားကိုတွေ့ရှိသည်နှင့်ညာဘက်အောက်ထောင့်ရှိ Continue ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
နောက်ပြတင်းပေါက် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝင်းဒိုး၏အမှတ်စဉ်နံပါတ်ကိုထည့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားတောင်းဆိုလိမ့်မည် installation နှင့်အတူဆက်လက်ရန်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်၎င်းတွင်လက်မရှိပါကထိုဗားရှင်းကို download လုပ်နိုင်သည်။ ဤဗားရှင်းသည်ကုန်ပစ္စည်းသော့လိုအပ်သည်၊ သို့မှသာသင်နောက်မှတောင်းဆိုနိုင်သည်။
နောက်ပြတင်းပေါက်ကကျွန်တော်တို့ကိုမေးလိမ့်မယ် ၀ င်းဒိုးကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ Pararells အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး စားပေးမှုများအရထုတ်လုပ်မှု၊ ဂိမ်းများ၊ ဒီဇိုင်းသို့မဟုတ်ဆော့ဝဲလ်တီထွင်မှုများအတွက်သာတပ်ဆင်ရန်လုပ်ဆောင်သည်။
လာမယ့်ပြတင်းပေါက်၌ငါတို့တတ်နိုင်သမျှ ဒီ virtual machine ၏အမည်ကိုသတ်မှတ်၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ install လုပ်မည့် Windows version နှင့်၎င်းကိုထည့်သွင်းမည့်နေရာရှိလိမ့်မည်။ Continue ကိုနှိပ်ပြီး installation လုပ်ငန်းစဉ်စတင်မည်။
Parallels နှင့်အတူ Mac တွင် Android ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း
Mac တွင်ကျွန်ုပ်တို့တပ်ဆင်မည့် Android version သည်စမ်းသပ်ဆဲအဆင့်တွင်ရှိနေသော application ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့အားဂူးဂဲလ်ပလေးအားမသုံးနိုင်ခြင်းကဲ့သို့သောကန့်သတ်ချက်အမျိုးမျိုးပေးထားသည်OS X နှင့်ဤ Android ဗားရှင်းတို့အကြားဖိုင်များဝေမျှသောအခါ Java Native Interface နှင့်ကန့်သတ်ချက်များအတွက်အထောက်အပံ့မပေးပါ။
ကျနော်တို့အဓိကမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရောက်တာနဲ့ကျနော်တို့သွားပါ အခမဲ့စနစ်များ Download Android ကိုနှစ်ကြိမ်နှိပ်ပါ။
လာမည့်ဝင်းဒိုးတွင်သင်ဤဗားရှင်းနှင့်ပတ်သက်။ သတင်းအချက်အလက်ကိုငါကမ်းလှမ်း။ ကျနော်တို့ရုံနှင့်ရန်ရှိသည် Download ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ, အောက်ပိုင်းညာဘက်ထောင့်တွင်တည်ရှိသည်။ ဒေါင်းလုပ်ကိုစတင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒေါင်းလုပ်သည်အလိုအလျောက်ပြီးဆုံးသည်နှင့်တပြိုင်နက် စက္ကန့်အနည်းငယ်သာကြာသော installation ကိုစတင်မည်.
ထည့်သွင်းပြီးတာနဲ့ Parallels ကအန်းဒရွိုက်တက်ဘလက်များ၏ပုံမှန်မျက်နှာပြင်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်ဇာတိ install လုပ်သော application အမျိုးမျိုးကိုရယူနိုင်ခြင်း။
Parallels ပါသော Mac တွင် Chrome OS ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း
Android version ကို install လုပ်ပြီးပြီဆိုရင် main screen ကနေ screen ရဲ့အောက်ခြေကိုသွားမယ် အခမဲ့စနစ်များအထိ.
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် Chrome OS ကိုသွားပြီးနှစ်ကြိမ်နှိပ်ပါ။ လာမယ့်ဝင်းဒိုးကိုကျနော်တို့အောက်ပိုင်းညာဘက်ထောင့်ကိုသွားနှင့် Download ကိုနှိပ်ပါ။ ဒေါင်းလုပ်သည်အလိုအလျောက်စတင်ပါလိမ့်မည်။
ထည့်သွင်းမှုစတင်ပြီးသည်နှင့် Chrome OS သည်သင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားကူညီပေးပါလိမ့်မည် အသုံးချပရိုဂရမ်၏ဘာသာစကား၊ ကီးဘုတ်နှင့်ကွန်ယက်ကိုပြုပြင်ပါ.
အောက်မှာ ဂူဂဲလ်အကောင့်တစ်ခုတောင်းဆိုလိမ့်မည် ကိရိယာကိုတွဲဖက်ပြီးတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ရန်။ နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အသုံးပြုသူအတွက်ပုံကိုတည်ထောင်ပြီး accept ကိုနှိပ်ပါ။
စက္ကန့်ပိုင်းအကြာတွင် installation ပြီးဆုံးသွားပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ Mac တွင် Chrome OS ကိုခံစားနိုင်တော့မည်ဖြစ်သည်။ ရရှိနိုင်သောအသုံးချပရိုဂရမ်များကို install လုပ်ရန် Chrome ဝက်ဘ်စတိုးကို ၀ င်ရောက်ခြင်း.
Parallels ပါသော Ubuntu ကို Mac တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း
ပထမဆုံး Free System ကိုသွားပြီး Ubuntu ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပါ။2GB ထက်ကြီးသောဖိုင်ကိုသင် download ဆွဲလိုသည့်အတွက်ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်အနည်းငယ်ပိုကြာလိမ့်မည်။ လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသည်နှင့် installation စတင်မည်။
Installation စတင်သည်နှင့်တပြိုင်နက် Ubuntu သည် system ကိုဝင်ရောက်ရန်စကားဝှက်တစ်ခုဖန်တီးရန်ပြောလိမ့်မည်။ ဤသင်တန်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အမြဲတမ်းအသုံးပြုရမည့်သင်တန်းဖြစ်လိမ့်မည်။
ထို့နောက် installation ကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက်၎င်းသည် Root password ကိုတောင်းလိမ့်မည်။ ပြီးခဲ့သောအဆင့်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးခဲ့သောစကားဝှက်ကိုရေးထည့်ရမည်။
ယခုအချိန်တွင် Ubuntu အတွက် Parrales tools များကိုစတင် install လုပ်မည်။ Parallels ကိရိယာများတပ်ဆင်ပြီးသည်နှင့် system ပြန်လည်စတင်ပြီး OS X နှင့် Parallels နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac မှ Ubuntu ကိုတိုက်ရိုက်သုံးနိုင်သည်။
ကွဲပြားခြားနားသောလည်ပတ်မှုစနစ်များကိုဘယ်လို run မလဲ
ပထမ ဦး ဆုံးသူတို့ကို run နိုင်မှ အရင်ကသူတို့ကိုထည့်သွင်းခဲ့ရတယ် ဤဆောင်းပါး၌ထင်ဟပ်လက္ခဏာများအရသိရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကဤ operating systems များကိုကျွန်ုပ်တို့လည်ပတ်လိုသည့်အခါတိုင်းသူတို့တပ်ဆင်ပြီးသည်နှင့် Paralles ပုံသင်္ကေတကိုနှိပ်ပြီး OS ကိုရွေးမည့်နေရာမှအပေါ်ပုံကိုအပေါ်တွင်ပြလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » Parallels - Mac တွင် Windows ကိုအသုံးပြုခြင်း၏ Ultimate Guide
Ivan Castillo ဟုသူကပြောသည်
ဘာကြောင့် Linux အတွက် Parallels ဗားရှင်းတစ်ခုမရှိတာလဲ။
ရွေးချယ်စရာများရှိသော်လည်း desktop နှင့်ပေါင်းစပ်မှုအဆင့်နှင့်အတူ။ ငါ OS တစ်ခုပေါ်တွင်လည်ပတ်နေသလိုမျိုး Windows application ကို run နိုင်သည်မှာ၎င်းသည်ပေါင်းစပ်ထားသည့်အပြင်ပေါင်းစည်းသည်ဟုခံစားရသည်။
Ubuntu အတွက်ဒီဟာရှိရင်ငါ့မှာကွန်ပြူတာ linux၊ windows virtual machine တွေရှိလိမ့်မယ်။
Iván Castillo အားစာပြန်ပါ
ကျေးဇူးပြု! ကျွန်ုပ်တွင်ရှိသည့်တစ်ခုထက် (အခြားအပိုဆောင်း operating system ကိုမည်သို့ထည့်သွင်းနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်ပြောပြခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ကူညီနိုင်သည်။ (ကျွန်ုပ်သည်အနိုင်ရသည် ၁၀ ၃၂ bits၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်လည်း 10-bit) လိုအပ်သည်။ သင်ခန်းစာမရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်ကြောက်သောအခါကြောက်မိသည်။ အသစ်ကိုရိုက်ထည့်ပါ၊ ငါဝင်းကိုဖျက်ပစ်မယ်။ 32 64 BITS, ငါပြီးသားရှိသည်! ကျေးဇူးပြုပြီးကူညီပါ။
စတိဗ်ဂျော့စ်သည် NeXT နှင့် Apple နှစ်ခုလုံးတွင်အမျိုးသမီးများ၏ရာထူးများကိုအမြဲတမ်းရာထူးတိုးပေးခဲ့သည်